Umzobo we-3D wabaqalayo: eyona software yokumisela imodeli | Abadali be-Intanethi
Umzobo we-3D ubonakala kubomi bethu ngokuhambela phambili kwetekhnoloji. Uninzi lwazo bezizotywe ngesandla ngaphambili, kodwa bezidinga imizobo emininzi ukuze zivele kwaye zikhule.
Yiyo loo nto kwesi sithuba sintathu-dimensional, sikunika ithuba lokufunda ngakumbi malunga nomzobo we-3D, ngenxa yoko, sikulungiselele uluhlu lwezixhobo eziza kukunceda uqale ubomi bakho obutsha ngolu hlobo lomzobo oluthathe indawo ephambili kwiminyaka yamuva.
Asifuni ukuya phambili kwaye ke siza kukuchazela kwangaphambili ukuba yintoni le ndlela yokuzoba kwaye kutheni kubalulekile ukuba uyifunde.
1 umzobo okanye uyilo lwe-3D
2 Isoftware ye3D yabaqalayo
2.2 Zkekela phezulu Yenza
2.6 I-3D Slash
3 Amagcisa e-3D kunye nabayili
3.1 umntwana omkhulu
3.2 UYanick Dusseault
3.3 UCecy Meade
umzobo okanye uyilo lwe-3D
Umthombo: abashicileli be-3D
Itekhnoloji ye-3D luhlobo lobuchwepheshe oluthi yavela ikakhulu eUnited States kwaye ekuhambeni kwexesha, yaba nodumo oluninzi kumazwe awahlukeneyo. Yaqala ngo-1915 kwaye imifanekiso yokuqala ye-3D kunye nemizobo yayiqikelelwe.
Emva kwamashumi ambalwa eminyaka phakathi kwezibane kunye nezithunzi, ngo-1980 kwavela IMAX, Inkampani ejongene nokubonisa iifilimu kumagumbi alungiselelwe ngokukodwa i-3D. Ukusabela kokukhwankqiswa kukuphucuka okukhulu kobu buchwepheshe kwenzeka kwihlabathi liphela. Ukususela ngaloo mzuzu ukuya phambili, izixhobo zaqala ukuphuhliswa ezisondeze i-3D kwihlabathi.
Isoftware ye3D yabaqalayo
Yenziwe ngo-1995, I-Blender yinkqubo epheleleyo ye-3D yokwenza imodeli, idume kakhulu kwihlabathi loopopayi kunye nevidiyo enkosi kwiimpawu ezininzi ezinikezelayo. Akukona nje kuphela mahhala, kodwa kunye nomthombo ovulekileyo, oku kuthetha ukuba ihlala iphuculwa. Isenokubonakala intsonkothile kodwa iluncedo kakhulu ukuba ufuna ngokungxamisekileyo ukuyila kwi-3D.
Enye yezona zinto zintle zinomtsalane zeBlender kukuba ixhasa yonke imibhobho ye-3D, kubandakanya imodeli, oopopayi, ukulinganisa, unikezelo, ukulandelela intshukumo, njl. Le software is cross-platform kwaye Iyafumaneka kwiikhompyuter zeLinux, zeWindows kunye neMac.
Isekelwe kwimodeli ye-polygonal, ayisosona sisombululo sisetyenziswa kakhulu kwicandelo lokuvelisa okongeziweyo, kodwa ivumela ukuthunyelwa kweemodeli ze-3D kwiifomathi ezilungiselelwe iteknoloji.
Zkekela phezulu Yenza
I-Sketchup Mak, eyayisaziwa ngokuba yi-SketchUp, yayiyilwe ngo-2000 yi-LastSoftware ukuze isetyenziswe kuyilo lwezakhiwo, ngoku iphantsi kwe-Trimble Navigation LLC.
Inkqubo yeSketchup isimahla kwaye ibonelela ngezixhobo ezilula kuluhlu olubanzi lwabasebenzisi: abavelisi, abayili bezakhiwo, abayili, iinjineli kunye nabakhi. Le nkqubo ikuvumela ukuba uzobe ngokulula izimvo zakho kwimodeli ye-3D.
Ngaphambi kokuba uqalise indalo yakho, unokukhetha ithemplate eya kukukhokela kuyo yonke inkqubo yomzekelo. I-software ye-3D eguquguqukayo kakhulu, egcina ibhalansi elungileyo phakathi kokusebenziseka kunye nokusebenza, ukhetho oluhle lwabaqalayo abazimisele ngokufunda iCAD.
Umkroli isebenzisa umfanekiso oqingqiweyo wedijithali njengesiseko sokwenza imodeli ye-3D. Ngamanye amazwi, uya kukwazi ukwenza imifuziselo yakho ye-3D ngokubumba nayiphi na i-mesh ngemivumbo yebrashi eyahlukeneyo.
Ukudala imodeli yakho kuya kufana nokubumba into usebenzisa udongwe. Le software iqala njenge sphere, emva koko umsebenzisi angayenza imodeli njengoko efunwa ngokolula, ukugrumba, ukugudisa, njl. Oku kuyenza ibe sisixhobo esifanelekileyo xa usenza oopopayi okanye imidlalo yevidiyo.
Kwakhona, ukuba ubungazi, Sculptris yekaPixologic, umdali weZbrush. Yisoftware elungileyo ye-3D yabaqalayo, ayisekho phantsi kophuhliso, unokuyikhuphela, kodwa isenokungahambelani neenkqubo ezintsha zokusebenza.
IVectary sisixhobo sokubonisa i-3D ekwi-intanethi onokuthi ngayo uyile, wabelane ngayo, kwaye ulungise uyilo lwe-3D. le software yindibaniselwano yemodeli yemesh esemgangathweni, imodeli yokwahlulahlula, kunye neeplagi zeparametric.
Yakhiwe ukusuka phantsi ukuya phezulu ukwenza imodeli ye-3D ibe lula kubaqalayo, kodwa inokuba luncedo kwiingcali. Ukongeza, iimodeli zigcinwa efini, apho zifumaneka khona nangasiphi na isikhangeli, abasebenzisi banokufikelela kwindalo yabo ngokulula kwaye babelane ngeemodeli zabo naphi na emhlabeni.
UClara.io, yisoftware enikezelayo kunye nemodeli, ekhutshwe yi-Exocortex, ukuze uyiqonde ngcono, yimodeli ye3D, oopopayi kunye nonikezelo lwesoftware Ifu eligcweleyo esekwe kwilifu elisebenza kwisikhangeli sakho sewebhu.
Esi sisombululo sikuvumela ukuba wenze iimodeli ezintsonkothileyo ze-3D, wenze unikezelo olumangalisayo lwefotorealistic kwaye wabelane ngazo ngaphandle kokufaka nayiphi na isoftware ethile. Ukufunda akunzima kakhulu, okwenza kube lula kubasebenzisi abangenawo amava amaninzi kule nkalo yokuyila.
Kule software, iijometri ze-3D zenziwe ngezinto ezahlukeneyo, ezibizwa ngokuba ngamacandelo. Amacandelo amathathu ahlukeneyo bubuso, imiphetho, kunye neendidi.
I-3DSlash yenziwa ngo-2013 nguSilvain Huet, owaphefumlelwa ngunyana wakhe odlala umdlalo wevidiyo iMinecraft, umdlalo apho kufuneka uphile kwihlabathi elenziwe ngeetyhubhu ezincinci. I-3Dslash, njengeMinecraft, isebenzisa amandla eebhloko ezincinci onokuthi uzisuse okanye uzidibanise kunye ukunceda ukwenza imodeli yakho ye-3D.
Isoftware ibonelela ngezixhobo ezahlukeneyo zokukunceda ukubumba uyilo lwakho, kubandakanya ukukwazi ukuguqula iindawo zokwenyani zibe yi-3D ngomfanekiso omane uwulayishe kwaye uwulandele.
Ukongeza, inesisombululo ukuya kuthi ga kwi-0.1 mm, oko kukuthi, le nkqubo iya kukunceda wenze into yakho ngokuchanekileyo, ikuvumela ukuba wenze izinto zakho zokudala ebomini.
Le software ye-3D yenzelwe ngokukodwa iinjongo zemfundo, uphuhliso lwayo lwenziwa ukuze nabani na asebenzise i-OpenSCAD, isoftware yeCAD yobuchwephesha.
Imiyalelo yokuphuhliswa kwezinto kunye nokuguqulwa kwazo zimelelwe iibhloko ezinemibala, zikhumbuza amathoyizi okwakha awaziwayo, i-LEGO. Ikhowudi ye-BlocksCAD ihambelana ngokupheleleyo ne-OpenSCAD ukuze ukwazi ukubeka ukugqiba kwiimodeli zakho apho.
Iifomathi zokuthumela ngaphandle zinokuba yi-OpenSCAD okanye i-STL. Ukuqinisekisa ukuba nabani na unokufunda indlela yokusebenzisa isoftware, iBlocksCAD ineshaneli ye-Youtube enezifundo ezahlukeneyo kwimodeli ye-3D.
Amagcisa e-3D kunye nabayili
Apha sikushiya uthotho lwamagcisa ukuba agqibezele ukukukhuthaza:
Grand Chamaco ithathwa njengelinye lawona magcisa anenguquko kakhulu e3D. Uzalelwe kwisiXeko saseMexico, uzifihla emva kwemaski efihla isazisi sakhe kodwa hayi italente yakhe.
Into ebonakalisa lo mzobi ngokungathandabuzekiyo kukukwazi kwakhe ukudala iimpawu eziyilwe kwaye zenziwe ngezixhobo ze-3D. Enye into ephawula imisebenzi yakhe ziintlobo ngeentlobo zemibala ayisebenzisayo, ekubeni eligcisa elithanda ukudlala ngoluhlu lwemibala nemibala.
Umthombo: I-Funniest Cinema
Yanick, ithathwa njengelinye lawona magcisa abalaseleyo kwishishini lefilimu. Uyingcali kwaye usebenza ngesitayela sobugcisa ingcamango art.
Ukwayincutshe yokupeyinta i-matte kunye ne-3D. Ukongeza, wafunda kwaye wafumana uqeqesho olukhulu lwezemfundo olusekwe kumzekeliso wobugcisa kunye neziphumo zedijithali, nto leyo kanye awayeza kuzinikela kuyo kamva, kwiminyaka kamva.
Uyaziwa ngokulawula iimveliso ezifana Abaguquleli, Star Trek, I-Indiana Jones: UBukumkani beNkakhayi yeCrystal), Imfazwe Yehlabathi, Iimfazwe zeNkwenkwezi: Isiqendu III, IiPirates zaseCaribbean, Isigcini III, Izixhobo ezibini, I-Titan AE phakathi kwabanye abaninzi.
Ungumzobi kunye nomyili okhethekileyo ekudaleni abalinganiswa. UCecy yingcaphephe kwimodeli ye-3D, ekwenzeni amabali ahamba kunye neziqwenga zakhe, kwaye ungumthandi omkhulu womculo.
Ngoku uzalisekisa iphupha lakhe lokuvelisa izinto zokudlala zobugcisa ngoyilo lwakhe: ngentsebenziswano neMagalaxy Toys, usungule umfanekiso wesofubi wokuqala oza kuqalisa ingqokelela enabanye abalinganiswa abaninzi.
Ngaphandle kwamathandabuzo ungomnye wabayili be3D ababalaseleyo ngoku.
Uthathwa njengomakhi wezakhiwo ngobuchwephesha kwaye onomdla ngeVFXingakumbi isimbo Ukukhanyisa.
Usebenze kwintengiso kunye nokusebenzisana neempawu ezifana ne-Autodesk kunye neNvidia, kunye nakwiimveliso ezinje. The Walking Dead, Umoyike Abafileyo Abahambayo, Amaqhawe azalwa ngokutsha okanye kumxholo wokuqala weNetflix eMexico, Iklabhu de Cuervos.
Umsebenzi wakhe ubusoloko uthatha ukukhanya njengento yevolumetric ezisa ubunyani kwimiboniso yakhe ye-3D.
Uyilo lwe-3D ngoku luhamba ngeendlela ezininzi, uninzi luzinikele ekunikezelweni nasekuyilweni kwezinto, ngelixa abanye besebenzisa umzobo kwaye bawujike ube bubugcisa bokwenyani obungaphaya komzobo.
Ngokuqinisekileyo asinakukuguqula ube ngumzobo we-3D oqeqeshiweyo. Kodwa siqinisekile ukuba ngale posi sikusondeze kufutshane neenjongo zakho ezilandelayo.
Sikushiye ngolu luhlu luncinci lwamagcisa ukuze ufumane kwaye ufumane kwakhona isitayile sakho, ukhuthazwe ngabo bakwi-elite yoyilo kwaye ufumanise ukuba yeyiphi indlela onokuthi ukhethe. Ngoku ixesha lifikile lokuba wenze uphando olupheleleyo kwaye ufunde ngakumbi malunga noyilo lwe-3D kwaye uvumele uyilo ludlale indima yalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imizobo ye-3D yabaqalayo
Eyona nto ibalulekileyo abayili begraphic kwimbali